Midowga Yurub oo Africa ku hor joogsanaya muhaajiriinta u safra Yurub. – Radio Daljir
Janaayo 22, 2017 2:34 b 0
Tripoli, Jan 22 2017-Warbixin dheer oo ka soo baxday Midowga Yurub ayaa waxaa looga hadlay Dhalinyarada Afrika ka soo jeeda, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku Tahriibaya Badda Mediterranean-ka.
Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay sanadihii ugu dambeeyay in ay soo badanayeen Dhalinyarada Tahriibka doonka ah ee ka imaanaya Geeska Afrika, Nafsadoodanada halista ku geliya Badda.
Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in ay Qalabeyn doonaan Ciidanka Ilaalada xeebaha Libya, si ay uga hortagaan ama ay u xakameeyaan Tahriibayaasha naftood haligayaasha ah ee doonaya in ay galaan Dalka Yurub.
“Ciidamadeena Badda ka howlgala ee ka hortaga soo galootiga ah, ogolaansho kama heystaan UN-ka iyo Maamulka Tripoli, si ay uga howlgalaan xeebaha Libya, sidaasi darteed waxaan sameyneynaa inaan qalabeyno Ciidanka xeebaha ee Libya. “Ayuu yiri Afhayeen u hadlay Midowga Yurub.
Ugu dambeyntii Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay sanadkii la soo dhaafay Dalalka Yurub in ay galeen Tahriibayaal gaaraya 180,000 oo Muhaajiriin ah, waxaana ay ka badan yihiin 2014-kii oo Dalalka Yurub ay galeen Tahriibayaal gaaraya 170,000.